Tun Tun's Photo Diary: Cherry blossom in Vancouver 2017
Cherry blossom in Vancouver 2017
အခု Canada နိုင်ငံ Vancouver မြို.မှာ Cherry ပန်း တွေ စပြီးကြွေနေပါပြီ။ တစ်လမ်းလုံး ပွင့်နေတဲ့ ချယ်ရီပန်းတွေ ကြွေတော့ တစ်လမ်းလုံး ပွင့်ဖတ်တွေ ပျံ.ကျဲပြီပေါ့။ Cherry ပန်းတွေ ကြွေပြီးရင် သစ်ရွက်တွေ နဲ. အသီးတွေ ထွက်လာတော့မယ်။ Cherry သီးတွေသီးပြီ ဆိုရင်လဲ ခူးလို.ကို မနိုင်ပါဘူး။ မုန်းနေအောင် စားရတယ်။ ဈေးဆိုင်တွေမှာလဲ Cherry သီးတွေကို ဈေးသက်သက်သာသာ နဲ. ၀ယ်စားလို.ရပါတယ်။
At West Vancouver
At East Hasting
at 4/17/2017 09:18:00 PM
Labels: Canada, Cherry, Flower, Sakura, Vancouver
phoe sann February 22, 2018 at 4:46 AM
So, finally, you're in Canada!
So envy. I have been seeing you since from the the blogposts of Ben Alagnam for moving to Canada. Hope you can write some similar blogs like Ben Alagnam so that we can adapt more efficiently and understand more as I am alsoafellow Burmese. Cheers!!!
Vancouver Spring Flower 2017